İtalya'da Bir Uçak Kayak Teleferiğinin Tellerine Çarpıp, Asılı Kaldı | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာလောကဥရောပ39 အီတလီအီတလီနိုင်ငံတွင်လေယာဉ်ပျံတစ်စီးသည်နှင်းလျှောစီးသော Cable ကားပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသည်
11 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 39 အီတလီ, ဥရောပ, လောက, အထွေထွေ, TELPHER, Teleski 0
အီတလီအဲလ်ပ်တောင်တန်းတွင်လေယာဉ်ပျံနှစ်စီးပါ ၀ င်သောလေယာဉ်ပျံသည်သယ်ဆောင်သူများအတွက်သယ်ဆောင်သည့်ကေဘယ်လ်ကား၏ဝါယာကြိုးများနှင့်ကပ်ထားသည်။
62 နှစ်အရွယ်လေယာဉ်မှူးသည်လေယာဉ်ပေါ်မှကျပြီးတောင်ပံပေါ်လဲကျတဲ့အတွက်အနည်းငယ်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ 55 သက်တမ်းရှိခရီးသွား as ည့်သည်သည်ခရီးသည်တစ် ဦး အဖြစ်လေယာဉ်ပေါ်တက်ပြီးဒဏ်ရာမရရှိခဲ့ပါ။ လေယာဉ်မှူးနှင့်ခရီးသည်များကိုတစ်နာရီခွဲ ခွဲ၍ ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သည်။
အီတလီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များသည် Prato Valentino တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောဖြစ်ရပ်အပြီးဝါယာကြိုးများနှင့်ကပ်လျက်လေယာဉ်သည်ဇောက်ထိုးကျဆင်းခဲ့သည်။
Italian National Cave နှင့် Mountain Rescue Unit မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Walter Milan ကလေယာဉ်သည်ပြိုကွဲခြင်းမရှိဘဲလေယာဉ်ထဲတွင်ပျက်ကျခဲ့ခြင်းနှင့်လေယာဉ်မှူးနှင့်ခရီးသည်ထွက်ပြေးခြင်းစသည့်အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
အီတလီမှာကပ်ဘေးဆိုင်ရာမတော်တဆမှု! ရထား Truck ကားနှင့်အတူကွဲသွားရင် 24 / 05 / 2018 အီတလီမြောက်ပိုင်းတူရင်တွင်ရထားနှင့်ထရပ်ကားတိုက်မိသည်။ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကြောင့်ရထား ၃ စီးကျသွားသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့်နေရာမှထရပ်ကားမောင်းသူသည်လွတ်မြောက်သွားခဲ့သည်။ အီတလီသတင်းအေဂျင်စီ ANSA ကသေဆုံးသူနှစ် ဦး မှာ kayb ဖြစ်သည်
အီတလီနိုင်ငံတွင်ရထား ၂ ခုတိုက်မိရာ 50 ဒဏ်ရာရ 30 / 03 / 2019 İtalya 'nın kuzeyindeki Como eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu yaklaşık 50 kişinin hafif yaralandı. İtalya İtfaiye Servisi, ülkenin kuzeyinde yer alan Como kentinde iki trenin çarpışması sonucu 50 kişinin yaralandığını…
Avcılarစစ်ဆေးမှုများအဆိုပါခရီးသည်လိုင်းအတွက်လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများရောက်ရှိရာမှမီးအောက်မှာ ရှိ. 23 / 07 / 2012 ဆင်ခြေလျှောရှိမြေနှင့်မီးကြိုးရှိဆင်ခြေဖုံးရှိလျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများ၊ မီးသတ်အဖွဲ့များအားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1,5 နာရီထိန်းချုပ်မှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Avcılarရှိသဲကန္တာရအတွင်းရှိမီးနှင့်ဆင်ခြေဖုံးလိုင်း၏ဝါယာကြိုးများဆီသို့ ဦး တည်သည်
တပ်ဆင်ကားတစ်စီးရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပြတ်လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများ trolleybuses ကျော်ရှင်းပြီ 25 / 09 / 2012 ရုရှားနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသများ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သောယာဉ်မတော်တဆမှုတွင်ဗလာဒီမီယာဒီးယားသည်ထရပ်ကားတစ်စီးသည်မော်တော်ယာဉ်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိပြီးမတ်တပ်ရပ်။ ဇောက်ထိုးလှန်ပြီးမှောက်ခဲ့သည်။ Vladimir's Suzdal လမ်း၌စိတ်ဝင်စားဖွယ်မတော်တဆမှုတစ်ခုတွင်ယာဉ်လုံခြုံရေးကင်မရာလည်းပါ ၀ င်သည်။
Bursada အနောက်တောင်လေသည်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းဝါယာကြိုးများပျက်စီးခဲ့ပါသည်သောအိမ်ခေါင်မိုးမှုတ် 31 / 01 / 2015 Bursada lodosun uçurduğu çatı tramvay tellerine zarar verdi :Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve lodos, ağaçların sökülmesine, işyerlerinin çatılarının uçmasına neden oldu. Bursa'da, bir işyerinin uçan demirçatısı tramvay tellerine zarar verince ulaşım…
အီတလီမှာကပ်ဘေးဆိုင်ရာမတော်တဆမှု! ရထား Truck ကားနှင့်အတူကွဲသွားရင်
အသစ်ကကေဘယ်လ်ကားများ၏Bursanınရိုးစွန်းဒေသများမှရဟတ်ယာဉ် (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ကချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်
အခြားနွေဦးBeşikdüzü cable ကိုကားတစ်စီး၏အဖွင့် ...